Sunglass polarisedia ho an'ny lahy sy ny vavy solomaso masoandro solomaso miloko fitaratra 100% UV manakana ny fanamboarana sy ny orinasa | Baolai
Sunglass polarized ho an'ny lehilahy sy vehivavy solomaso Masoandro fitaratra miloko 100% fanakanana UV
1. rafitra plastika
3. ★ AROVY NY MASO AMIN'NY STYLE ▶ Namboarinay ny solomaso misy polarized anay hiarovana ny masonao raha mbola eo ambanin'ny tara-masoandro UV manimba ianao ary hahatonga anao ho TSY MAINTSY amin'ny fotoana iray, satria fantatray fa ny fahasalamana sy ny fomban'izy ireo dia samy manan-danja. Na mitondra fiara ianao, na mandeha na miasa, na lehilahy ianao na vehivavy, dia miomàna amin'ny fikarakarana rehetra azonao atao sy ny fitsiriritan'ireo rehetra tsy afaka mamantatra ny TENINAO KELY: Ny Sunglass KALIYADI anao.
4. ★ AZA ATAO ATAO HITSANGATRA INDRINDRA ANDRO ▶ Ireo solomaso solomaso ireo dia misy LENSES POLARIZED ambony voadinika izay notsapainay rehefa nandeha ny fotoana. Ny polarization dia mampihena ny famirapiratra taratry ny fitaratra, ny fitaovana mamirapiratra na nohosorana na ny karazana taratry ny taratry ny masoandro. Ho tsapanao fa milamina foana ny masonao satria tsy hikimpy intsony ianao! Na mitondra fiara ianao hiasa, mandeha amin'ny valan-javaboary na milentika tsara tarehy eny amoron-dranomasina dia ho Reraka ianao amin'ny faran'ny andro satria MORA mifandray bebe kokoa ny masonao.
5. ★ JEREO IZAO TONTOLO IZAO AMIN'NY MARINA MARINA AZY ▶ Ireo masom-pifaneraseran'ny solomaso solomaso HD dia manolotra PERCEPTION COLOR COLOR marina noho ny loko tsy miandany sy ny VISY MAZAVA amin'ny fanesorana ny jiro taratra sy miparitaka. Noho izany ianao dia afaka mankafy ny solomaso solosaina mandritra ny hetsika ivelany rehetra ataonao, mitondra fiara, manjono na spaoro amin'ny rano ihany koa. ALAO sary an-tsaina fotsiny ny hatsaranao fa tsy mila miahiahy momba ny fahasalamana amin'ny masonao ianao rehefa afaka mankafy sy mankafy an'izao tontolo izao amin'ny antsipiriany tsara tarehy rehetra.
6. ★ MIFANDEHANA MAIMAIM-POANA ARY MANDEHA MAIMAIMPOANA ▶ Fantatray fa tsy afaka mahazo aina ireo sary ary ahoana no fiantraikan'izany amin'ny mpitafy rehetra. Izahay dia miahy ny fahitana anao ary te hanampy anao hitazona ny solomaso misy anao raha mbola mila azy ireo ianao. Noho izany dia naka fitaovana maivana ho an'ny solomaso izahay, solomaso polarisedra tsy simba ary nitandrina izahay mba hialana sy hodiovina ny sisiny rehetra ka HADINONAO HANANAO AZO AMIN'NY masoandro aza izy ireo. Ny mitondra solomaso solomaso dia mbola tsy nilamina sy nilamina ary nahazo aina kokoa noho ny IZAO!
ITEMY NO. 10161-6354
Previous: Sunglasses ho an'ny aviator ho an'ny lehilahy 100% UV Protection Goggle Alloy Frame